Shina Eco-friendly elastika malefaka hoditra malemy paosy fanamboarana spaonjy blender mpanamboatra sy mpamatsy | Dongmei
Miorina ara-tontolo iainana lasantsy malemy paika malemy hoditra, spaonjy hatsaran-tarehy spaonjy blender
Tsy mahazaka solika sy tsy misy fotaka, fanaraha-maso menaka tsara, mahazaka menaka ary tsy misy menaka ary tsy vaky. Sariaka amin'ny hoditra, malefaka ary marefo-vita amin'ny teknolojia polymer, azo antoka ary tsy misy fofona hafahafa, malefaka sy marefo, tsy mahasosotra ary tsy mahazaka otrikaina.
Ireo sponjy ireo dia natao ho fitaovana tonga lafatra amin'ny fifangaroana. Izy ireo dia azo ampiasaina amin'ny karazana makiazy isan-karazany mba hahitana fototra, crème BB, vovoka, fanafenana, fitokanana, ranoka, sns.
● Ho an'ny vovoka sy ranoka
Atsofohy ny vokatra vovoka, toy ny fototra, vovoka malalaka sns, izay misy pentina mivantana ary avy eo mikopakopaka amin'ny tavanao rehefa maina ny spaonjy makiazy. Ho an'ny fampiharana vokatra milky na crème, toy ny crème BB, lotion, concealer, izay ao anaty rano no alentika voalohany ao anaty rano, na handraosoka kosmetika be dia be, ka miteraka fako.
● Spongy ary azo sitrana
Ireto spaonjy makiazy ireto dia matevina sy mahatohitra ranomaso, izay tsy ho simba aorian'ny fampiasana andro maromaro. Mora ampiasaina sy madio izy ireo, ka mahatonga azy io ho safidy tsara hatramin'ny amateurs ka hatrany amin'ny pro. Mora ny manatsara ny fahazarana amin'ny hatsaran-tarehinao amin'ny fampiasana an'ity spaonjy hatsaran-tarehy ity.
● Malemy ho an'ny hoditra
Manangana fitaovana tsy latsa-danja sy tsy alèena, ireo spaonjy makiazy ireo dia malefaka Q ary malefaka amin'ny fiononan'ny hoditra. Azo antoka ny fampiasana azy ireo. Ireo fitaovana makiazy malefaka sy malefaka ireo dia safidy mety indrindra hahatratrarana ny fampiharana tsy misy ratra amin'ny fototra iorenanao, ny fisongadinanao ary ny varahinao.
Tena mora diovina:
Arotsaho amin'ny rano mafana ny spaonjy, ametaho vitsivitsy amin'ireo mpanadio malefaka, ary alao malefaka amin'ny alàlan'ny rantsantanana mba hamoahana ny makiazy, menaka ary bakteria.
Tsindrio tsy tapaka ary kobanina amin'ny rano madio, sasao eo ambanin'ny rano mandeha ny spaonjy mandra-pahatongan'ny rano mandeha tsara.
Sasao mandra-pahatongan'ny sisa tavela, araraka amin'ny servieta taratasy ny rano fanampiny, tazomy amin'ny toerana maina sy misy rivotra.
Teo aloha: Vehivavy makiazy atody spaonjy mando sy maina
Manaraka: Dongshen makeup sponjy blender ho an'ny crème vovoka na fampiharana ranoka
Wholesale Sponge Wholesale
Sponjy amin'ny tarehy
Ambongadiny spaonjy spaonjy
Sponjy hatsaran-tarehy marika manokana
Sponjy Make Up
borosy makiazy napetraka, Barber Shave, Fitaovana borosy makiazy, Mametraha makiazy borosy, Manaova borosy, Faritra fiharatra,